यस्तो भयो भीआईपीको वडा दशैं - Wnepal.com::
यस्तो भयो भीआईपीको वडा दशैं
नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँँको दशमीका दिन मंगलबार मान्यजनबाट टीका, जमरा र प्रसाद लगाइँदैछ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले टीकाको उत्तम साइत बिहान १० बजे ३५ मिनेटका लागि तोकेअनुसारको समयमा टीका लगाउने प्रचलन छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहान १० बजेर ३५ मिनेटको शुभसाइतमा आमा मिथिला पाण्डेबाट शितल निवासमा टीका लगाइन् । त्यसपछि उनले आफन्त र सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिएकी थिइन् ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले बुबा रामसुर पुनको हातबाट टीका ग्रहण गरे । उपराष्ट्रपति भवन, हरितगृहमा ८६ वर्षीय बुबाबाट उनले दशैंको टीका लगाएका हुन् ।
उक्त अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले सचिवालय सदस्यहरु, सुरक्षाकर्मीहरु र आफन्तलाई पनि टीका लगाइदिएको उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीमगरले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो साढे २ बजे पिता मोहनप्रसाद ओलीको हातबाट टीका लगाएका छन् । बालुवाटारमा आफूले टीका लगाएपछि उनले पत्नी राधिकालाई टीका लगाइदिएका थिए । त्यसअघि अपरान्ह १ बजेर ३५ मिनेटमा राष्ट्रपति भवन शितल निवास पुगेका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशैंको टीका, जमरा र माला लगाइदिएका थिइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा कानुन तथा न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजया दशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजयादशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विजयादशमीका दिन मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई टीका लगाई दिनुहुँदै ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ९० वर्षीय पिता भोजप्रसाद भट्टराईको हातबाट टीका ग्रहण गरेका छन् ।
विजया दशमीको उपलक्ष्यमा टीका ग्रहण गरेको फोटा राख्दै डा. भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सबैको भलो होस ! देशमा शान्ति, सुशासन र समृद्धिको बर्षा होस ! असत्य र अन्यायमाथि सत्य र न्यायको विजय होस !’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दाजु तथा भाउजुको हातबाट दशैंको टीका लगाएका छन् ।
श्रम रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि ९ वर्षपछि गृहजिल्ला गुल्मी आएर आमा ८९ वर्षीया चिन्ताको हातबाट टीका लगाएका छन् । इस्मा गाउँपालिका–४ स्थित घरमा पुगेर मन्त्री बिष्टले टीका लगाएका हुन् ।
विभिन्न कारणले ९ वर्षपछि मात्रै आमाको हातको टीका लगाउन पाएको बताउँदै उनले आमाको आग्रह अनुसार दशैंको टीका लगाउनका लागि आएको पनि जनाए ।
थापाले दाजु अवकास प्राप्त रथी नेत्रबहादुर थापा र भाउजु अमिताको हातको टीका लगाएका हुन् । आफूले टीका ग्रहण गरे पश्चात उनले परिवारका अन्य सदस्यलाई टीका लगाइदिएका थिए ।